Baleka ubomi kwisiXeko uye kwikhaya elihle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEphing
Siyakwamkela ukuhlala ixesha elide kunye neenjongo ezinxulumene nomsebenzi.
Le ndawo igcinwe ngokugqibeleleyo kunye nesibongozo sangoku. Indawo enkulu yokuhlala yenzelwe ukwamkela ukuhamba kwangaphakathi ukuya ngaphandle ngokuhambelanayo.
Ikhaya lam linamagumbi okulala amathathu anesisa, Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo zombini ukhetho lwangaphandle kunye netafile yokutyela yangaphakathi.
Ngokuqinisekileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhoxa emsebenzini, usapho okanye abahlobo babalekele ukuphithizela kwesixeko.
Hamba uye eKFC, uHungry Jack kunye noColes kwizinto zakho ezibalulekileyo
Iimpawu zendlu yam
Iindawo zokupaka zasimahla
Amagumbi okulala ama-3 abanzi.
Iishawa ezi-3 kunye nezindlu zangasese ezi-3 kunye nebhafu enye
Igumbi lokulala eliphambili elinebhedi enkulu yeen-suite. Kunye neWardrobe enkulu yokuhamba
Igumbi lokulala eli-2 linebhedi ye-Queen kunye nendawo enkulu ngokwaneleyo yokubeka ibhedi eyongezelelweyo ukuba iyafuneka.
Onke amagumbi okulala akhelwe kwiwodrophu (indawo ezininzi zemithwalo.
Iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo zeSofa kwigumbi lokuhlala
Imizuzu emi-5 uqhuba ukuya kwi-M7 kunye ne-M5
Imizuzu emi-5 ukuya kuHungry Jack, KFC kunye nesikhululo sepetroli esineColes kwiimfuno zakho ezisisiseko zegrosari.
I-45 - 55 imiz ukuya eSydney CBD
35 - 45 imizuzu ukuya nokusuka kwisikhululo seenqwelomoya
Imizuzu eyi-17 ukuya eStockland
Imizuzu emi-5 ukuya kwiklabhu yamaKatolika yeLiverpool
Imizuzu eyi-15 iqhuba ukuya eLiverpool Westfield
Imizuzu eyi-15 ukuya kwisibhedlele saseLiverpool
35 - 45 imizuzu ukuqhuba i-Olympic Park
Ngaphakathi kwikhaya lam elithandekayo, uya kufumana indawo epholileyo, ecocekileyo yokuseta nayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale eWest Hoxton ngokukhululeka. Igumbi lokuhlala elivulekileyo elivulekileyo lifakwe isitayile esincinci ukunika ukuhlala kamnandi.
Ikhitshi enkulu enesicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye nokutya. kunye nomnyango wokonwabela umoya omtsha kwaye uve iintaka zicula
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngesitovu sombane, indawo yokupheka kunye nefriji yobungakanani obunobuhlobo, uya kuba nazo zonke izinto eziyimfuneko zokwenza ukutya okuthandayo. Kwikhabhathi unokufumana zonke izixhobo eziyimfuneko ukupheka, ukucoca kunye nokutya, kunye neti yokuncoma kunye nekhofi.
Igumbi lokuhlala lineendawo ezi-2, enye onokuyonwabela ikofu kunye nokuncokola. Esinye isithuba sineesofa ezi-2 ezintsha ezinokuguqulelwa kwiibhedi zesofa.
Le ndawo ilungile ukuba uqhuba, unokuyimisa ngokulula imoto yakho kwigaraji ephindwe kabini enendawo eyongezelelweyo yemoto kwindlela yokuqhuba.
I-West Hoxtox ye-Sydney i-Treasure efihliweyo. Ifakwe kwi-40 km kwintshona ye-Sydney CBD. Uphi uHoxton okuvumela ukuba ubalekele esixekweni kwaye ungene kwindawo ezolileyo.
Ikhaya lam elinesisa lihamba ngemizuzu emine kuphela ukuya entliziyweni yesixeko iCarnes Hill. Iivenkile kwindawo yentengiso yaseCarnes Hill apho unokufumana khona iibrendi ezinkulu ezinje nge-W enkulu, enexabiso kunye neevenkile ezikhethekileyo ezingama-50. Le ndawo yentengiso inento yakhe wonke umntu. Ngamaxesha onyaka ashushu, kutheni ungayonwabeli ipiknikhi kunye neentsapho kunye nabahlobo kwiipaki ezikufutshane kwabo baziva benomdla ngokufanelekileyo ndwendwela i-wet'nwild okanye iTrees top adventure eWestern Sydney.
Umbuki zindwendwe ngu- Ephing
Ngena ngebhokisi yokutshixa ukuze ukhululeke ukuba uzijonge emva kwentsimbi yesi-4 emva kwemini ngexesha lakho lokuphumla. Andizubakho ukuze ndikubulise kodwa ndiza kukubonelela ngencwadi yesikhokelo enomyalelo wasekhitshini, incwadi yendlu kunye neeNgcebiso zasekhaya malunga neendawo zokutyela kunye nezolonwabo. Ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye unemibuzo ngexesha lokuhlala kwakho. Ndiyavuya kakhulu kukufumana imiyalezo kunye neefowuni nangona kunjalo, ukuba ndiyakukhumbula okanye ndiphumile (nceda ushiye umyalezo kwaye ndiza kubuyela kuwe ngokukhawuleza.
Ngena ngebhokisi yokutshixa ukuze ukhululeke ukuba uzijonge emva kwentsimbi yesi-4 emva kwemini ngexesha lakho lokuphumla. Andizubakho ukuze ndikubulise kodwa ndiza kukubonelela ng…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-10858-1
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- West Hoxton